Android 6.0 Marshmallow ozi ọma, mkpisiaka nkwado | Akụkọ akụrụngwa
Ihe dị ọhụrụ na gam akporo 6.0 Marshmallow, nkwado mkpisiaka
Xavi Carrasco | | android, Telephony
Nkwado mkpisiaka nke gam akporo 6.0 Marshamallow bụ otu n'ime akwụkwọ akụkọ kachasị atụ anya nke sistemụ arụmọrụ Google ọhụrụMgbe ọtụtụ ndị nrụpụta, gụnyere Samsung na Galaxy S5 na S6 ya, gụnyere ya, arụmọrụ a abụrụla otu n'ime ndị ọrụ kachasị achọ.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị nrụpụta abanyelarị na ụzọ ahụ tupu sistemụ arụmọrụ gam akporo ọhụrụ apụta ma ha malitere ịrịgo ngwaike dị mkpa iji rụọ ọrụ a na ekwentị ha. Ndị na-emepụta ihe mepụtara usoro ngwanrọ iji mejuputa ọrụ njirimara akara aka ọhụrụ., ma na mbata nke Marshmallow, nke a bụ ibu ọrụ nke Google monopolizes site ugbu a gaa n'ihu.
1 Ọrụ nkwado mkpịsị aka.
2 Ọ bụ n’anyị enweghị ike icheta okwuntughe ọzọ?
3 Ozi ndị ọzọ na gam akporo 6.0 Marshmallow
Ọrụ nkwado mkpịsị aka.
Ọrụ izizi nke Google nyere anyị site na nkwado ọhụụ ya bụ atọ, akpọghe, API iji mee ihe na ngwa, na ịzụrụ ihe na Storelọ Ahịa Play, n'agbanyeghị na n'ọdịnihu, anyị ga-ahụ ụzọ ọhụrụ iji teknụzụ a.
Unkpọghe Ruo ugbu a, ọ bụ uru kachasị dị na ịnweta onye na-agụ akara mkpịsị aka ma ọ na-enye anyị ohere ịnweta ngwa ngwa nke ọdịnaya nke ọdụ anyị na-enweghị isere ụkpụrụ ma ọ bụ tinye paswọọdụ ma ọ bụ ntụtụ. Ejiri usoro ihe eji eme ihe ma ọ bụ okwuntughe ka akwadoro ya na ihe mmetụta mkpisi aka.
Android ga-echekwa mkpịsị aka anyị ka ịzụ ahịa na Playlọ Ahịa Play nwere nkasi obi ka anyị rụọ, ọ dị mkpa maka Google na ihe niile dị mfe ma dịkwa mma mgbe anyị na-azụ ihe na Storelọ Ahịa Play, ebe ụlọ ahịa ngwa a bụ otu n'ime isi mmalite ego maka ụlọ ọrụ ahụ.
La API maka ndị mmepe bụ otu n'ime ọrụ ọhụrụ na n'ezie ihe kachasị mkpa, na nke ahụ bụ na Goolge akwadebela mmepe mmepe ka ndị niile na-emepụta ngwa wee nwee ike ịnweta ma jiri ọrụ mkpịsị aka nche rụọ ọrụ, mepee akụkụ ọhụrụ maka ngwa niile chọrọ nyocha.
Ọ bụ n’anyị enweghị ike icheta okwuntughe ọzọ?
A ka nwere oge maka nke a, na n'ime obere oge paswọọdụ enweghị ike iji ihe biometric dochie ya kpamkpam nke njirimara ndị a ebe ọ bụ na mkpịsị aka anyị nwere ike ịta ahụhụ na-adịru nwa oge ma ọ bụ ọbụna na-adịgide adịgide, anyị ga-achọkwa usoro ọdịnala iji nyochaa njirimara anyị.
Chee na isi abụghị na teknụzụ naanị mana ọ bụ n'iji ya eme ya, yabụ ụzọ ọhụrụ iji nyochaa njirimara anyị ga-anọgide na-egosi nke ọma karịa, a pụrụ ịdabere na ya na usoro nyocha ọzọ. Ma teknụzụ a, nke dị na fim ahụ ka a na-etinye na ogwe na ọnụ ụzọ buru ibu dị na isi ụlọ ọrụ mega-ụlọ ọrụ, abanyela n'ime igwe anyị ugbu a ma anyị na-eji ya kwa ụbọchị.
Ozi ndị ọzọ na gam akporo 6.0 Marshmallow
News Android 6.0 Marshmallow, Ugbu a na Mgbata
Gịnị bụ ihe ọhụrụ gam akporo 6.0 Marshmallow, Expandable Nchekwa
Kedu ihe ọhụrụ gam akporo 6.0 Marshmallow, Doze
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » android » Ihe dị ọhụrụ na gam akporo 6.0 Marshmallow, nkwado mkpisiaka
Ndewo, ederede m 4 ka emelitere na gam akporo 6.0 ma enwere m nsogbu iji nwee ike itinye mkpọchi ihuenyo ahụ na mkpisiaka aka. Enweelarị akara mkpịsị aka m, ma mgbe m gara itinye mkpọchi ahụ, ọ na-ajụ m maka paswọọdụ ọzọ na mgbe m gbalịrị ọ gwa m, gbaghara, gbalịa ọzọ. Onweghi uzo, tinye nke na ekweghi m.
Zaghachi sonia maroto
Egogo m ụzọ idozi ya mana enweghị m ike ịchọta ụzọ m ga-esi ehichapụ okwu ahụ, nwee nwute ma daalụ 😉 m mejọrọ
Ndewo Sonia. Nwere ike ikwu maka otu ị si edozi nsogbu nke okwuntughe ọzọ? Enwere m otu nsogbu ahụ. Daalụ
Zaghachi Robin Cruzado
Ọ na-emekwa m ma ọ bụrụ na mmadụ maara azịza ya? Daalụ.
Zaghachi Miguel Angel de Juan
Enwere m Xperia z3 mana enweghị m ike ịhụ otu esi arụ ọrụ ahụ, mmadụ enwere ike inyere m aka?
A nnukwu ajụjụ m nwere bụ na mkpisiaka nkwado ga-Integrated n'ime ngwaike ma ọ bụ, naanị site na-enwe android marshmallow ??? : d
Zaghachi Eduardo Nava
Omume 6 jọgburu onwe ya na ekwentị gị nke ị kwesịrị iwepụ ugbu a
Ihe 5 kpatara HTC One A9 ji dị mma karịa iPhone 6S